३० बैशाख २०७७, मंगलवार ०८:२९
काठमाडाैँ । लकडाउन खुलेकाे हाे त ? आम सर्वसाधारणमा उब्जिएकाे प्रश्न हाे याे ।
अहिले सामाजिक संजालमा विभिन्न सवारी साधान चलेकाे पाेष्टहरू सजिलै देख्न सकिन्छ ।
सामाजिक संजालमा याे पनि प्रश्न उठ्न थालेकाे छ , लकडाउन त आम सर्वसाधरण जनताका लागि मात्र हाे । धनी वा कार, गाडी, बाइक भएकाहरूका लागि हाेइन ।
साेमबार २९ गते भद्रकाली र न्युराेडक गेटकाे दृश्य नियाल्ने हाे भने माथि उल्लेखित भनाइहरू हाे कि भन्ने पनि लाग्छ । हुन त लकडाउनकाे ५० औं दिन भैसकेकाे छ । काेठामा मात्र बसिरहदा सबैलाई बाहिर निस्कन मन त लाग्छ नै । तर साेमबार नै पास नभएका गाडी र बाइकरू सयाैंकाे संख्यामा समातेर कार्बाही गरेकाे थियाे ।
नेपाल सरकारले लकडाउनला खुकुलाे बनाउने नीति ल्याएकाे छ तर कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्नेमा सरकार नै अन्याेल देखिन्छन् । तर सरकारले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सवारीसाधन कडाइ गरेर उपत्यकालाई केही खुकुलो पारे पनि यहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ।
एकजना चालक, सहचालक र सहयोगी भनेर तीनजना मालवाहक सवारीमा उपत्यका प्रवेश गर्ने गरेको प्रहरी तथ्यांकले नै बताउँछ। तर सम्बन्धित डिपोहरूमा सामाना झारेपछि ती चालक र सहचालक कहाँ बस्छन् र कहाँ खान्छन् भन्नेबारे सरकारी निकाय नै जानकार छैन। तर भिआइपी चढेर आएर गाडि र मालवाहक सवारीकै कारण उपत्यका कोरोना सर्ने हो कि भन्ने त्रास फैलिएको ललितपुरका सहायक प्रजिअ खिमराज भुसालले बताए।
अब काठमाडाैँमा सर्वसाधरणका लागि लकडाउनकाे नीति के हाे त ? सरकारले याे नीति तत्कालै सार्वजनिक गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
घर भाडा नलिन सांसद छिरिङ दाेर्जे लामाकाे अनुराेध